गफ ! .....: कविता : जिन्दगी बाँच्न किन सकिंदैन ?
Posted by दीपक जडित at 2:01 AM
खै,थाहा भएन किन जिन्दगी बाँच्न सकिँदैन । "हामी सधैँ बाच्ने कोशिस गरिरहेका हुन्छौँ, तर बाँच्न कहिले सक्दैनौँ" ।
mancheko jindagi bachna dherai garo huncha jasto lagcha malai,jaha here sune khoje anusar, kahi pani kehi satya dekhdina, ra kahi pani kohi mancheharu khusi dekhdina,sabai manche haru chin chin ma mari mari bachiraheko huncha, mancheko jindagima chahine harek kura haruko abhab ma, kohi prem bata dhoka,kohi logne bata tiraskrit, kohi deshdrohibata pidit, kohi rinbata,kohi bebasayebata,kohi bhukhmaribata, kohi chora choribata kohi jiubechne bata piditkohi lagu padhartha sewan bata kohi afno pariwarko tadhapanbata ta kohi afno lognebata tadha huda......... harek mancheharule jindagi yasari nai mari mari bitairaheka chan, yi samasyaharulai hami kahile pani samadhan garna sakindaina...........
राम्रो कविता दीपकजी! अलिक निराशवादी भने पक्कै हो। जिन्दगी जस्तो छ त्यसलाई स्विकार गरेर अगाडी बढ्नुको विकल्प छैन जस्तो लाग्छ।
वसन्त जी ,
प्रातिक्रियाको लागी धन्यवाद । संधै जीवनसंग हारें भनेर घोर निरासाको भुमरीमा छट्पटीने यौटा साथीलाई छातीमा सगरमाथा छामेर बाँचिहेर जिन्दगी बाँच्न किन सकिन्न ? भन्दै लेखेको यो कविता आफैंमा निरासावादी छ र ? मेरो लेखाईमा कमजोरी भयो होला तर मैले त जीवन बाँच्नलाई आईपर्ने निरासावादलाई चिर्न खोजेको थिएं ।